ICazoo - Kungani ngingakwenzanga phambilini?
Impendulo ilula kakhulu, i-Cazoo iyahlinzeka! nft.cazoo.it yazalwa ekuqaleni kuka-2022 ngesicelo somphakathi ofanayo, owawulokhu uphatha izicelo zokusebenzisana ...
Qhubeka ufundaImaphi amaqoqo e-NFT amasha ezayo ngo-2022?
Uhwebo ngalunye, umsebenzi ngamunye wezezimali owenziwa eBinance, okuyi-Exchange enkulu kunazo zonke emhlabeni namuhla, kunezindleko, ikhomishini, imali. Uma ungabhalisile ku ...
Qhubeka ufundaIsaphulelo kumali ye-Binance
Ake sithole ukuthi yini iBinance, isetshenziswa kanjani nokuthi ungathenga futhi uthengise kanjani ama-cryptocurrensets ngale Exchange enkulu.
Qhubeka ufundaUmhlahlandlela ophelele wokuqonda ukuthi ungayisebenzisa kanjani iBinance
Isigaba Sento:Umdlalo we-Sorare
Ngesikhathi sasehlobo yonke i-Europe yebhola lezinyawo imisa imiqhudelwano yayo izinyanga ezimbalwa, ngaphezulu noma ngaphansi, ukuphumula okufanele. Empeleni uJune inyanga ababukana ngayo...
Qhubeka ufundaI-Sorare: yimiphi imiqhudelwano ekhona ehlobo? Kubuyekezwe ngo-2022
Abakhiqizi Bezimakethe Ezizenzakalelayo bakhuthaza abasebenzisi ukuthi babe abahlinzeki bezimali ezishintshayo ukuze bathole ingxenye yezindleko zokwenziwa komsebenzi kanye namathokheni amahhala. Ngenkathi u-Uniswap ezalwa e...
Qhubeka ufundaIyini i-AMM, i-Automated Market Maker?
Umbiko wakamuva wanyanga zonke we-CryptoCompare ubonisa ukuthi u-Binance uthwebule cishe ingxenye yesithathu yenani eliphelele elidayiswe ezinkundleni zezimali ze-crypto ngoMashi 2022. Awukho ubhanana. Ngokombiko wakamuva ka...
Qhubeka ufundaIngabe u-Binance Uphephile? Iphathe u-30% wevolumu yendawo ye-cryptocurrencies ngoMashi 2022
TL: DR Lapho ukhetha ukuthenga noma ukuthengisa i-NFT kufanele ube namamethrikhi athile ayisisekelo engqondweni ukuze ulinganise inani elingase libe khona. Ngibala amamethrikhi ayisishiyagalombili, ayisishiyagalombili ...
Qhubeka ufundaAmamethrikhi okufanele acatshangelwe ukuthenga nokuthengisa ama-NFT
I-TL: Izinhlamvu zemali zemfihlo ze-DRLP yimali eyimfihlo engafihla noma ifihle okwenziwayo ku-blockchain ukuze kugcinwe amazinga aphezulu obumfihlo nokungaziwa. Indlela yabo ye-cryptographic ethuthukisiwe yilokho ...
Qhubeka ufundaIzinhlamvu zemali zobumfihlo ezingcono kakhulu eziyi-10 nokuthi ungazithenga kanjani
Ungawathola kanjani ama-NFTs enza i-100x?
I-NFT: Umhlahlandlela ophelele wokuthola i-100x elandelayo!
Ubani ongeke afune ukwenza i-x50 noma i-x100 ngokutshalwa kwezimali kwe-NFT? Kodwa-ke, iba nzima kakhulu kune-cryptocurrencies, ngoba kunezici ezimbalwa ezihlukile ...
Qhubeka ufundaI-NFT: Umhlahlandlela ophelele wokuthola i-100x elandelayo!
I-NFT Quarterly Report 2022
Umbiko we-NFT: U-2021 unyaka wokukhula okukhulu
Sifunde umbiko wakamuva we-Nonfungible, onikezelwe emhlabeni we-NFT. Ingabe siyethemba i-Nonfungible? Ngingubani? Yasungulwa ngo-2018 ekuqaleni ukulandelela ukuthengiselana kwesikhathi sangempela kwe-Decentraland, inkampani ...
Qhubeka ufundaUmbiko we-NFT: U-2021 unyaka wokukhula okukhulu
I-TL: U-DR Binance wethula umncintiswano omusha, i-Football Championship. Noma ngubani ohweba kakhulu uwina i-BUSD kakhulu. Ukubungaza owamanqamu weCopa America nowe-EURO Cup, kanye nomoya wokuncintisana we ...
Qhubeka ufundaUkunikezwa kwebhola: ukushintshanisa i-fiat nokwabelana. Umklomelo wePhuli: 50.000 BUSD ngeBinance
Indawo Yemakethe yeBinance NFT: Amaqoqo ka-Andy Warhol, uSalvador Dalì
Amathokheni Angabonakali (NFTs) anqobile umhlaba. Ngaphandle kokuthi uhlala emhumeni, lapho i-wifi iba yimbi kakhulu, usuzwile ngalokhu okusha ...
Qhubeka ufundaIndawo Yemakethe yeBinance NFT: Amaqoqo ka-Andy Warhol, uSalvador Dalì
Ukuvuselelwa kwakamuva kweMetamask kwenza impilo ibe lula kubathandi beBinance Smart Chain: manje kungenzeka ukushintshanisa amathokheni ngqo kusuka kudeskithophu noma esikhwameni seselula. Umsebenzi wokushintshanisa uhlanganisa idatha ...
Qhubeka ufundaUkuvuselelwa kweMetamask: Shintsha ku-Binance Smart Chain ngqo kusuka esikhwameni seMetamask
I-India ingahambisa ukuhlukanisa iBitcoin njengesigaba sempahla
Yebo yebo! I-India, eqale yakhombisa ubutha obuningi maqondana ne-cryptocurrensets, manje seyithumele ikomidi okulindeleke ukuthi lithumele isiphakamiso sokuphakanyiswa kwikhabhinethi kungekudala. Ngemuva…
Qhubeka ufundaI-India ingahambisa ukuhlukanisa iBitcoin njengesigaba sempahla
Asekho amakhasi azolayishwa
Izindatshana ezindala →